November 2019 - Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
November 28, 2019zinmeeAnnouncements
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန ၊ ၀န်ကြီးရုံးနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတို့အတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် – ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့) ( ခ ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ – တင်ဒါပုံစံများကို တစ်စောင်လျှင် ကျပ်၅၀၀၀/- (ကျပ်ငါးထောင်တိတိ)နှုန်းဖြင့် ၀န်ကြီးရုံး၊ ၀န်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ( ဂ ) တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် နှင့်အချိန်/ဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – ၁၁-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့၊နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီ ၃။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန ၊ ၀န်ကြီးရုံး ၊ ၀န်ကြီး ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ...
November 25, 2019mohtNews
With World Heritage registration Promoting the whole of Myanmar (MJ+ Plus Business Economic November 2019 Vol-63)
Yutaka Nagasugi: In July of this year, the World Heritage Committee of UNESCO registered Bagan heritage, one of Myanmar’s leading tourist destinations, asanew world cultural heritage. To commemorate this great news, today we would like to interview Mr. U Ohn Maung, Ministry of Hotels and Tourism. First of all, please tell us your...
November 22, 2019hninwuttyelwinAnnouncements
November 20, 2019hninwuttyelwinUpcoming events
November 20, 2019mohtNews
VICE President U Henry Van Thio who was in Kachin State, Myitkyna, left for Yangon yesterday afternoon and was seen off at Myitkyina Airport by State Chief Minister Dr Khet Aung, State Hluttaw Speaker U Tun Tin, State Chief Justice U Tu Jar, State Advocate-general, auditor-general, ministers, Hluttaw representatives, ethnic cultural groups, Ethnic Kachin Entrepreneurs...
November 20, 2019hninwuttyelwinAnnouncements
November 14, 2019mohtNews
Hotel & tourism ministry coordinates for increased Japanese tourists
THE Ministry of Hotel and Tourism organizedacoordination meeting to promote the Japan market for tourism as Yangon’s Sule Shangri-La Hotel yesterday. Union Minister U Ohn Maung discussed how they have prepared digital marketing groups for the travel destinations of different countries. He said they have translated CDs and DVDs of Myanmar’s travel destinations...
November 7, 2019hninwuttyelwinUpcoming events